Vechidiki Vatengi Vari Kutyaira Ecommerce MuIndonesia | ECommerce nhau
Zvinoenderana ne eMarketer mushumo, the e-commerce muIndonesia iri kuwedzera kukura. Iyo yekutsvagisa kambani inoratidza izvo vatengi ve digital munyika iyoyo, ichakura makumi maviri muzana kana kupfuura kusvika 20 uye inozopedzisira yadudzira kuva vanopfuura mamirioni makumi matanhatu vatengi.
Ecommerce Kukura muIndonesia
Zvinoenderana nemushumo iwoyu, chimwe chezvinhu zvakakosha mu kukura kwee-commerce muIndonesia Kwave kuri kupinda kweInternet pakati pevatengi vadiki. Chikonzero cheichi ndechekuti idzi mhando dzevatengi dzinowanzo kuve dzinoshanda zvakanyanya mukutenga online zvichienzaniswa nevatengi vekare.
Mune kumwe kuongorora kwe2016 kwakaitwa ne Penyelenggara Jasa Internet Telecommunications Association yeIndonesia, pane tsika dzepamhepo dzevatengi munyika iyoyo, yakaratidza kuti kupinda kweInternet munyika kunoitirwa vatengi vadiki.
ari mhedzisiro yekudzidza ivo zvakare vakaratidza kuti kupinda kweInternet kuri pamusoro pe75% pakati pevatengi mune 10-24 uye 25-34 zera renji. Pane zvinopesana, kupinda kweInternet pakati pevashandisi vari pakati pemazera e35 ne44 yaive makumi maviri muzana poindi yakaderera.
Uyu mutsauko mu kupinda kweInternet pakati pevatengi vadiki zvine chekuita nekutenga kwedhijitari. Muchokwadi, chikamu chakakura chevatengi veadhijitari munyika ino chinobva kune vatengi vari pakati pemakore gumi nemasere kusvika makumi matatu nemana.
Chekupedzisira, zvinotaurwa zvakare kuti vatengesi veIndonesian online vari kutarisa nzira nyowani dzekuwedzera mari yavo kuburikidza neizvi chikamu chiri kukura chevatengesi veecommerce. Nhau dzakanaka kwavari ndedzekuti idzi mhando dzevatengi dzinofanirwa kuve chinhu chakakosha mune chero eayo marongero epamhepo ekushambadzira kuti abudirire.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Vechidiki vatengi vari kutyaira Ecommerce muIndonesia
Maitiro ekuchengetedza mari kana uchitenga online paKisimusi